သမဂ္ဂများနှင့်အသင်းအဖွဲ့များ - Potatoes News
ရုရှား၏အာလူးစိုက်ပျိုးသူများ၏ 10 နှစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းအဖွဲ့
Europatat သည်အီးယူကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူနှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းများကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်
ဥရောပအာလူးကုန်သွယ်မှုအသင်းသည်ရောမဗော့စ်ဆတ်အားနည်းပညာရာဒါရိုက်တာအသစ်ခန့်အပ်ခြင်းကိုကြေငြာရန် ၀ မ်းသာသည်။
အောက်တိုဘာလ 24, 2020
FAO ဒေသဆိုင်ရာညီလာခံသည်တက်ရောက်သူ ၅၄၀ ကျော်နှင့်တက်ရောက်သူစံချိန်ကိုချိုးဖောက်ပြီးဒီဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းများမှတဆင့်လိုက်နာသူ ၃၀၀၀၀ နီးပါးရှိသည်
အောက်တိုဘာလ 19, 2020
ငါလယ်သမားတစ် ဦး ဖြစ်လာသည့်အခါအခြားလူများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အတွေ့အကြုံနည်းပါးလာသည်။
2021 ဆင်းသက်, သင့်အာလူးမျက်နှာပြင်များ (-15%) ကိုလျှော့ချဆောင်းတွင်းကောက်ပဲသီးနှံများနှင့်ဂျုံမျိုးစေ့ကိုကြဲ!
20/21 မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးနှင့်အလားအလာများအတွက်မျှော်လင့်ထားသည့်အခြေအနေသည် COVID-19 ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုအပြောင်းအလဲများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ 19/20 နှင့် 20 / 21.
စက်တင်ဘာလ 27, 2020
ကမ္ဘာ့အာလူးကြော်ကွန်ရက်တွင် ၀ င်ဘာနီနိုဝင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၂၀၊ ၀၀ နာရီနံနက် ၉း၀၀ နာရီ၊ လက်ရှိစံချိန်စံညွှန်း -“ အထက်နှင့်အောက်မြေပုံ - ရောဂါများ ...
ဘုတ်အဖွဲ့သည် Castile နှင့်Leónအာလူးတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုသည်
ကက်စတီလာ y လီယွန်သည်ဟက်တာ ၁၉,၀၀၀ ကျော်ရှိသည့်ဤသီးနှံစိုက်ခင်းကိုအထူးစိုက်withရိယာwithရိယာနှင့်အတူ ...
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အိုင်းရစ်အာလူးနှင့်အခြားစိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များကိုတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ အောက်ပါ ...
၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်ဝါရှင်တန်၊ အော်ရီဂွန်နှင့်အိုင်ဒါဟိုတို့၏ပြည်နယ်အာလူးကော်မရှင်သည်အကျိုးအမြတ်မယူသော ၅၀၁ (ဂ) (၃) ကော်ပိုရေးရှင်းကိုအာလူးဟုခေါ်သည်။
IPPC ePhyto Solution မှစက်မှုအကြံပေးအဖွဲ့ (IAG) မှ ePhyto အား ...
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ဆည်မြောင်းသည်တစ်ဟက်တာလျှင် ၃၀၀၀ ကီလိုဂရမ်အပိုဓာတ်ရရှိခဲ့သည်